धम्पुस चुचुरोका आरोहीको अनुभव- उचाइसँगै बढ्यो आत्मविश्वास – Nepal Japan
नेपाल जापान १२ फाल्गुन २०:४०
‘मानिसको जीवनमा धेरै रहर हुने गर्छन्, कुनै पूरा हुन्छन् कुनै हुँदैनन् । मलाइ पनि हिउँसँगको चुचुरोमा पुग्ने रहर निकै थियो पूरा भयो’ माघको ३ गते धम्पुस पिक (६०१२ मिटर) आरोहण गर्न सफल ४३ वर्षीय हीराकुमारी मल्ल एउटा सपना पूरा भएको अनुभव सुनाउँदै भन्नुभयो ।
“म सन् २००७ बाट ट्रेकिङ गाइडका रुपमा काम गर्दै आएकी छु, विदेशी पर्यटकलाई नेपालको भूगोल, रहनसहन र संस्कृतिका बारेमा बुझाउँदै र हिमालका चुचुरो देखाउँदै जाँदा मलाई पनि त्यहाँ पुग्ने रहर जाग्यो, चुचुरोमा पुग्न आँट चाहिने रहेछ, अन्ततः सफल भएँ ।”
गुरुङले अत्याधिक हावाको वेग र चिसोले गर्दा केही कठिनाइ भएको सुनाउनुभयो । हिमाल आरोहणप्रतिको रुचिका बारेमा गुरुङले भन्नुभयो, “म नेपालकी छोरी, डाँडापाखा कन्दरा कति गरेकी छु, चुचुराको फेदमा कैयाँै पटक पुगेकी छु तर चुचुरो उक्लने कुरामा हामीलाई विश्वास नगरिँदो रहेछ ।” उहाँले २०१३ मा एउटा पिक चढ्न जाँदाको अनुभव सुनाउँदै भन्नुभयो “म केही समय अघि हिमाल आरोहणको तयारी गरेकी थिएँ तर त्यहाँका केही मानिसहरुले मलाई विदेशीसँग विहे गरेर आएको हो ? नत्र एक्लै महिलाले कहाँ हिमाल चढ्न सक्छन् भनियो, मलाई यो कुराले निकै चोट पुग्यो । आफ्नै भू–भागका चुचुरोमा पुग्न विदेशीसँग विहे गर्नुपर्ने वा अरुको साहारामा मात्र उक्लनुपर्ने हो र ? किन विश्वास नगरेका आफ्नै चेलीहरुलाई” गुरुङले भन्नुभयो “मलाई यस्तै यस्तै कुराले पनि थप प्रेरणा मिल्यो र म चुचुरोमा उक्लन थालेँ र सफल पनि भएँ ।”
म्याग्दीका ३४ वर्षीय र्याफ्टिङ गाइड सनकुमार जुग्जाली खोलामा पौडिरहेको मानिस चुचुरोमा पुग्दाको अनुभव बटुल्ने आरोहरण गरेको बताउनुहुन्छ । “समुद्री सतहबाट उच्च तहसम्मको अनुभव बटुल्न मन लाग्यो । केही दिनको तालिमले ऊर्जा मिल्यो अनि छ हजार मिटरको चुली उक्लन सफल भइयो ।”
नेपाल पर्वतारोहण संघ गण्डकी प्रदेशको आयोजनामा माघ तीन गते १० जना आरोही धम्पुस पिक (थापापिक उपनामले पनि चिनिने) पुगेका थिए । चार जना मौसमको प्रतिकुलता कारण बीचबाट फर्किए भने बाँकी छ जना आरोहण गर्न सफल भएका संघका अध्यक्ष शेषकान्त शर्माले जानकारी दिनुभयो । उहाँले गण्डकी प्रदेशका पिकहरुको प्रवद्र्धन गरेर पर्वतीय पर्वतारोहणको लागि एउटा उत्कृष्ट गन्तब्यको रुपमा विकास गर्न पहिलो पटक धम्पुस पिक आरोहण गराइएको बताउनुभयो । “गण्डकी पर्वतीय गतिविधिमा पछाडि परेको महसुस हामीले गरेका छाँै, यस क्षेत्रका हिउँचुचुराहरुको आधिकारिक तथ्याङ्क अझै सङ्कलन हुन सकेको छैन । यस क्षेत्रका हिमालहरुको प्रोफाइल तयार गर्न प्रदेश सरकारसँग आग्रह गरेका छौँ ।” उहाँले प्रदेशमा १८ वटा अहिलेसम्म नचढिएका पिक रहेका पछिल्लो समय जानकारीमा आएको बताउनुभयो ।